Ciidanka Dab-demiska Somaliland oo tababar siiyay ardayda dugsiyada ELM Schools.
Ciidanka Dab-demiska Qaranka oo ku gudajira hawlaha tababarka iyo wacyigelinta ardayda dhigata dugsiyada kala duwan ee Somaliland, ayaa maanta tababar iyo wacyigelin u sameeyay ardayda wax ka dhigata dugsiga Elm ee magaalada Hargeysa.
Waaxda tababarada bulshada iyo wacyigelinta oo uu horkacayo hogaan xigeenka waaxda Eng Muuse Cabdi Ismaaciil ayaa halkaa ardayda ku tababaray habka kahortagga khataraha dabka, qaabka loo sheegayo hadii ay arkaan dab iyo wacyigelin guud oo ku saabsan dabka.
Ardayda ayaa intaa kadib qaar ka mid ahi yimaadeen taliska guud ee ciidanka Dab-demiska ee magaalada Hargeysa, waxaana halkaa ay ku soo mareen qaybaha kala duwan ee xarunta sida isgaadhsiinta, gaadiidka iyo dirayska ciidamada oo loo sharaxay habka loogu shaqeeyo.
Gudoomiyaha Waxbarashada degmada Hargeysa Marwo Aamina Casayr magan oo halkaa ka hadashay ayaa u mahadnaqday ciidamada Dab-demiska kaalinta laxaadka leh ee ay ka jiraan bulshada, sidoo kale waxay bogaadisay wacyigelinta ardayda ee dugsiyada waxbarashada oo ay sheegtay inay muhiim tahay in markastaba la xoojiyo wacyigelinta ardayda.
Ugu dambayn Gudoomiyaha ayaa ardayda kula dardaarantay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha keeni kara dab, hadii ay arkaana ay u sheegaan dadka waaweyn iyo waalidka, sidoo kale xafidaan lambarka gurmadka degdega ah ee 990.
Alle haw naxariistee waxaa goor dhawayd ciidamada Dabdemiska caasimada Hargeysa ka hawlgaleen Wiil yar oo geed koray, kadibna uu ku dhagay xadhiga laydhka fayska.
Alle haw naxariistee waxaa goor dhawayd ciidamada Dabdemiska caasimada Hargeysa ...
Ciidanka Dab-demiska Ceerigaabo OO u damiyay guri daara oo qol ka mida dab qabsaday.
Ciidanka Dab-demiska Ceerigaabo ayaa u gurmaday guri daara oo qol ka mida dab qa...
Warbixin dabkii ka dhacay Suuqa weyn ee Waaheen ee Ciidamada Dab-demisu damiyeen.
Dabkii abaaro xalay 8:00 pm ka bilaabmay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa oo had...
Xubno Ka Tirsan Ururka Dhagooleyaasha Somaliland Oo Booqasho Ku Yimi Taliska Guud Ee Ciidanka Dab-Demiska
Ururka dhagoolayaasha Somaliland ee ( Somaliland Deaf Association ) ayaa maanta ...
Ciidanka Dab-demiska caasimada Hargeysa iyo ciidamada Dab-demiska Burco oo maanta ka hawlgalay daminta dabab kala duwan magaalooyinka Burco iyo Hargeysa.
Ciidanka Dab-demiska caasimada Hargeysa iyo ciidamada Dab-demiska Burco oo maant...
Safiirka UK ee Somaliland Amb Kate Foster oo soo Booqatay Taliska guud ee Ciidanka Dab-demiska JSL.
Taliyaha Ciidanka Dab-demiska Jamhuuriyadda Somaliland sareeye guuto Axmed Maxam...
Ciidanka Dab-Demiska Oo Xakameeyey Dab Ku Fidayey Suuqa Weyn Ee Hargeysa
Ciidanka Dab-demiska JSL oo ka hawlgalay Meherado iyo Bakhaaro habeenimadii xala...
Taliyaha Ciidanka Dab-Demiska Jsl Oo Taliska Ku Qaabiley Aggaasima Guud Ee Wasaaradda Amniga
Taliyaha Ciidanka Dab-demiska Somaliland Sareeye Guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaa...